>Ko Lay Lwin is seriously ill
> ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် လေးလွင် (ခ) ကိုလေးကျန်းမာရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရ မိုးမခအထောက်တော် ဝဝ၈ဧပြီ ၇၊ ၂၀၀၉ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုလေးလွင် (ခ) ကိုလေး သည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားသဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်။ အဆုတ်နှင့် ပတ်သက်သော ဝေဒနာနှင့် အခြားသော ဝေဒနာများကြောင့် ယခုနှစ်ဆန်းမှ စတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်(ဇင်းမယ်)မြို့တွင် ဆေးရုံသို့ အကြိမ်ကြိမ် တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူနေရပြီး ၄င်း၏ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းများ၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ၀ိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသည်။ ကိုလေးလွင်သည် ၈၈ အရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်ရန် စတင်လှုပ်ရှားသူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတွင် တစ်ဦး အပါအ၀င်...
>Metta Nanda Monastery host 2009 Burmese New Year Festival – VDo Archive
> Metta Nanda Monastery host 2009 Burmese New Year Festival with Nibban Charity Bazaar at San Francisco Bay Area on April 5th, 2009 April 7th, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>5th April 2009 – MoeMaKa Sunday Weekly Radio
> ဧပြီလ ၅၊ ၂၀၀၉ – မိုးမခ ရေဒီယိုအစီစဉ် သပြေခက်နဲ့ ရေပက် – တင်တင်မြ သတင်းတိုထွာနဲ့ သီချင်းပဒေသာ ၂၀၀၉ ဆစ်ဒနီသင်္ကြန်ပွဲတော် အပိုင်း ၁ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ဘုရားသံပေါက် – စွာကျယ်၊ ခေတ်ပြိုင် ထူးမခြားနားသီချင်းခန့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ – အကယ်ဒမီ စိန်မွတ္တား သင်္ကြန်သတင်းနဲ့ သီချင်း အိုင်ရင်းခရော့စ် ဖြော်ဖြေပွဲနဲ့ လူဘမ်းပွဲ လဘက်နဲ့ ဂယက် နောက်ခံတေးများများ ၀န်ခံစကား အထူးကဏ္ဍ – မြန်မာလူမျိုးစု လူမှုရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းနိုင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ် စီစဉ်သူ – ဦးပန်တျာ၊ နှင်းမြတ်ခိုင်၊ ခင်သက်ပိုင် No tags for this post. Related posts...
>2 Burmese women arrested in KL
> မလေးရှားမှ မြန်မာအမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို ဘိန်းဖြူများဖြင့် ဖမ်းမိBernama သတင်းဌာနဧပြီ ၇၊ ၂၀၀၉ မြန်မာအမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို ဘိန်းဖြူများဖြင့် ကွာလာလမ်ပူ မြို့တော် Cheras မြို့ Taman Segar အရပ်တွင် ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ဖမ်းဆီးရမ်ိသော ဘိန်းဖြူများမှာ ၃.၁၅ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး မလေးရှားရင်းဂစ် တသိန်းခွဲ တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသမီး ၂ ဦးမှာ အသက် ၃၀ နှင့် ၃၈ နှစ်အရွယ် ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ကွာလာလမ်ပူ မြို့တော် မူးယစ်ဆေးဝါးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန အကြီးအကဲ Kang Chez Chiang က ပြောသည်။ ၎င်းတို့ ၂ ဦးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် ဒေသခံ အမျိုးသား ၂...
>You & Us
> ‘မင်းနဲ့ငါ’ လှိုင် ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၉ ခြေမပါ လက်မပါ ယောက်ယက်ခတ် ကစဉ့်ကလျား တွားသွားနေလိုက်ကြတာ ဘာကောင်တွေပါလိမ့် အလို လူတွေ ဟ . . . . . . . . ဟော … တွေ့လား ဟိုမှာ မင်းနဲ့ငါ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ထောင်ဝင်စာကန့်သတ်သဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့က ကန့်ကွက် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၉ မြစ်ကြီးနားထောင်ရောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့၏ ထောင်ဝင်စာကို တလလျှင် ၂ ကြိမ်မှ တလလျှင် ၁ ကြိမ်သို့ အကြောင်းပြချက် တစုံတရမရှိဘဲ ပြောင်းရွှေ့ကန့်သတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ သင်္ကြန်နီးချိန် ရုံးပိတ်ရက်များကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက် ယခုဧပြီလ ဒုတိယအပတ်အတွင်း ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန် ကြိုးစားသူမိသားစုဝင်တို့ကို နောက်လမှ လာရန် ထောင်အာဏာပိုင်တို့က အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ထောင်အာဏာပိုင်တို့က အချို့သော အကျဉ်းသားများကို တလ ၂ ကြိမ် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပေးထားပြီး ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းမှာ တရားမျှတမှုမရှိဟု ဆိုကာ ထောင်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့က ၎င်းတို့လက်ခံရရှိထားသော ထောင်ဝင်စာများကို လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန် ကန့်ကွက်လိုက်သည်ဟုလည်း မိသားစုဝင်များက...
>Burmese in Japan produced "Mingalar Doe" Thangyat for 2009
> ဂျပန်ရောက် မြန်မာများရဲ့ မင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့ ၂၀၀၉ သံချပ်ထုတ်ဝေ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၇ ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၉ ဂျပန်ပြည်ရောက် မြန်မာများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့က ဒီနှစ်မှာလည်း ရဲရဲတောက်တေးသံချပ်များကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၆ နဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်များမှာ တေးသံချပ်များကို သီဆိုတီးမှုတ်ဖြော်ဖြေခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၈ မှာတော့ ဂျပန်ပြည်ကို လာရောက် ကပြတဲ့ သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံအဖွဲ့ကို နောက်ခံ တေးဂီတနဲ့ ကူညီတင်ဆက်ပေးတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ယခု ၂၀၀၉ ဧပြီ ၁၂ မှာ ဂျပန်ပြည်ရောက် မြန်မာတွေ ဆင်နွှဲကြမယ့် သင်္ကြန်ပွဲအမီ ၂၀၀၉ ရဲရဲတောက် တေးသံချပ်အယ်ဘန်ကို ထုတ်ဝေလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလည်း သွားရောက်...
> တောင်ရိုးပေါ်ကသစ္စာသမားသို့အောင်သာငယ်ဧပြီ ၅၊ ၂၀၀၉ လမ်းထွင်းခဲ့တဲ့ပန်းတခြင်းထဲ…တင်မိုး၊ ကြည်အောင်စွမ်းရည်၊ မောင်သာနိုးပန်းအမျိုးမျိုးဝေလို့… ကဗျာ့ တပ်မှူးကြီး…ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတွေထက်ခမ်းနားကြီးမြတ်သပေါ့… တံဆိပ်တွေ အထပ်ထပ်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဇွတ် အတင်း အဓမ္မဆွဲယူ ကပ်ပြနေစရာမလို… ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ဆွဲချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအနန္တနဲ့လှပနေခဲ့ပြီးသား… သစ္စာတိုင် ဆိုတဲ့ သီချင်းကနှလုံးသားကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးသား… မာရသွန်မှာသက်လုံကောင်းခဲ့တာကြည်အောင်ဆိုတဲ့ ဆရာပါပဲ… သည်တောင်ရိုးမှာကျားဆိုးတွေ ဆရာ သတ်ခဲ့ … ခုတော့ဆရာ့ကိုဘယ်သူ သတ်ခဲ့ပြီလဲ… ဆရာမသေပါဘူး…ဒါကိုပဲကျနော်တို့ရွတ်ဖတ်နေကြတယ်… ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Kalyar Mi Tay on Tea Leaf salad
> ကလျာမိတေ ကာတွန်းဧပြီ ၅၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Becareful Before G-Talk
> ဂျီတော့ခ်သုံးစွဲသူတို့ လုံခြုံရေးသတိ ရှိစေလို မိုးမခ စာဖတ်သူတဦး ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၉ မြန်မာစစ်အစိုးရက အင်တာနက်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်ကို ပိုမိုတိုးမြှင့်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းကနေပြီး ပြည်ပနှင့် ဂျီတော့ခ် (အင်တာနက်ပေါ်က အပြန်အလှန် စာရိုက်၊ စကားပြော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်) သုံးသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တို့ ပေါက်ကြားကုန်ပြီး အဲဒီအထောက်အထားတွေနဲ့ လူ ၄ ဦး ဖမ်းခံရတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ စစ်အစိုးရဖက်က ကမကထလုပ်ဖွင့်ထားတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေအနက်၊ ((သို့မဟုတ်) စစ်အစိုးရဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်ခံထားရလို့ သတင်းပေးလုပ်နေတဲ့ဆိုင်တွေ ထဲက လို့ ပြောချင်လည်း ရပါတယ်) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က ဆိုင်အချို့မှာ သွားရောက်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့ ပြောပါတယ်။ အင်တာနက်နှေးလွန်းလို့၊ အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ထားလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်၊ ယခုတလောမှာ မိမိမိတ်ဆွေများကတဆင့် သို့မဟုတ် အင်တာနက်ဆိုင်တွေရဲ့...
> ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရကျောင်း သင်္ကြန်ပွဲနှင့် နိဗ္ဗန်ဈေးအလှူကျင်းပပြီးစီး မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရှိ မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရကျောင်း၏ သင်္ကြန်ပွဲနှင့် နိဗ္ဗန်ဈေးအလှူကို နယူးအတ်ခ်ပါဗီလျံ ရိပ်သာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ မြန်မာပရိသတ်နှင့် စိတ်ဝင်စားသူ အခြားလူမျိုး ဘာသာစုံတို့ လာရောက်ကြသည်။ ပရိသတ် ၅၀၀ ကျော် တက်ရောက်သည်။ မြန်မာလူငယ်များက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အက၊ အလှ၊ ဂီတတို့နှင့် ဧည့်သည်တို့ကို ဧည့်ခံခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံကို နှိပ်ပြီး ပွဲတော်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview) (0) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရကျောင်း တန်ဆောင်တိုင်ပွဲမြင်ကွင်း...
> ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်သုံးခုတွင် ကာလ၀မ်းရောဂါပိုးတစ်မျိုး ပျံ့နှံ့ ၀င်းမြတ် ဧပြီ ၅၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံ၊သာကေတနှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်များတွင် ကာလ ၀မ်းရောဂါပိုးတစ်မျိုး ပျံ့ပွားနေပြီး ကူးစက်ခံရသူအချို့ ဆေးရုံတင်ထားရသည်။ ၄င်းမြို့နယ်များတွင် ကာလ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားစေသည့် ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုး ပျံ့နှံ့နေသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲမှုဌာနမှ ဓါတ်ခွဲမှူးများက စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ဓါတ်ခွဲမှူး တစ်ဦးကပြောပါသည်။ “ဗီဘရီယို ကော်လိုရာ(Vibrio Cholerae)လို့ ခေါ်တဲ့ ကာလ၀မ်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကို ကြံရည်နဲ့ အသုတ်မှာသုံးတဲ့ အချည်ရည်တွေမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ထားတယ်။ သူက ရိုးရိုး ၀မ်းကိုက်ရောဂါပိုးမဟုတ်ဘူး။ ကာလ၀မ်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုး” ဟု အဆိုပါ ဓါတ်ခွဲမှူးကပြောပါသည်။ အဆိုပါ ဘက်တီးရီးယားများသယ်ဆောင်လာသည့် ယင်ကောင်များ ကြံရည်ကျိတ်စက်၊ အရည်ကျိတ်မည့် ကြံများတွင်...
>Than Soe Hlaing – Eleven Media, Whisky & Burmese Censorship
> အလဲဗင်းမီဒီယာ၊ ၀ီစကီနှင့် စာပေစိစစ်ရေး သန်းစိုးလှိုင် ဧပြီ ၅၊ ၂၀၀၉ စာပေစိစစ်ရေး ခုံရုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာ မည်သို့မျှ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခွင့်မရခဲ့ သည့်ပြင် စစ်အာဏာရှင် တည်မြဲရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ပုံဖျက်ကာ နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးချခဲ့သည့် သာဓကပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့သည်။ ထိုစစ်အာဏာရှင် စနစ်၏ ဖိနှိပ်ရေးလက်နက် ကိရိယာတခုဖြစ်သည့် စာပေစိစစ်ရေး သည်လည်း လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ပြခွင့်၊ ရေးသားခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာ အနုပညာ ဖန်တီးခွင့်များကို တားဆီးချုပ်ချယ်နေသည့် နေရာ ဌါနတခု ဖြစ်သည်။ ထိုသို့တားဆီး ချုပ်ချုယ်နေသည့် စာပေစိစစ်ရေးကို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် လိုလားသူတိုင်း မည်သူမျှ မနှစ်သက်ကြပေ။...
>The Pe Maung – Burmese Reporter of our Time
> မြန်မာပြည်တွင်းသတင်းထောက် သည်ဖေမောင် ဧပြီ ၄၊ ၂၀၀၉ စတုတ္ထမြောက် ဒေါက်တိုင်တဲ့လား နေပူထဲက အော်နေကြ ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့စတုတ္ထတဲ့။ ယမ်းငွေ့တွေကြားထဲမှာ … အမှန်တရားရှာရ … ပြောရတာလည်း အခက်သားလား။ အဲ … အဲ … ပြောလိုက်ကြသေး … (တချို့က) အများဆန္ဒအကြိုက် … ကြော်ငြာလေးနဲ့ မှေးနေလိုက်… ရေလိုက် ငါးလိုက်တဲ့… ဒါကိုဘ၀လို့ ခေါ်သလား… အား … ခါးလွန်းတယ် … အများအတွက်လည်း ခါးချင်ခါးမယ် ဈေးကွက်သဘောအရ မပြောပ လောက်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် (ဆရာ့) ဆရာကြီးတွေ ငြိုငြင်မှာစိုးတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးခါးကြီးဆိုတော့ … အလွယ်သောက်လို့ ရချင်မှရမယ်… နောက်ဆုံးတော့ ငါ့ဆေးငါပြန်မြိုခဲ့ရ… လောလောဆယ်...
>Law Eh Soe – The Second Return …
> ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် တဖန်ကြွလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လောအယ်စိုး ဧပြီ ၄၊ ၂၀၀၉ ကျနော်သည် ထာဝရဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းနှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းတရားကို ယုံကြည်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တဦးဖြစ်ပါသည်။ စာကိုပင်ကောင်းမွန်စွာ မဖတ်တတ်မီကတည်းက ကျနော်၏မိခင်သည် ကျနော်တို့ညီအကိုသုံးဦးအား သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ အကြောင်းအရာများကို ပုံပြင်သဖွယ် ညအိပ်ယာမ၀င်မီ ပြောပြတတ်ပြီး ကျမ်းပိုဒ်အချို့တို့ကို အလွတ်ရအောင် နှုတ်တိုက်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုသမ္မာကျမ်းစာ၏ ဆုံးမသွန်သင်၊ ခွန်အားပေးမှုတို့ကြောင့်ဖြင့်သာ ဘ၀၏အလွန်အားနည်းသောအချိန်များ၊ မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးလုလု အနေအထားတို့၌ ကျနော်သည် ခွန်အား၊ လန်းဆန်းမှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အနာဂါတ်လမ်းခရီးတို့ကို မြင်နိုင်လာခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းကို မည်သို့တန်ဘိုးထားရမည်ကို တစထက်တစ တိုး၍ ခံစားသိရှိလားခဲ့ပါသည်။ ကျနော်ချစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံးကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြသည့် တိုင်းသူပြည်သားများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲမှ ကျနော်တို့...
>Kyi Maung Than – To Heavyweight Poet
> ဟဲဗီးဝိတ်ကဗျာဆရာ သို့ ကြည်မောင်သန်း ဧပြီ ၄၊ ၂၀၀၉ ကဗျာဆရာ … ကဗျာဆရာနဲ့ ကျွန်တော်က လူချင်းမရင်းနှီးပါဘူး ကဗျာ အချင်းချင်းကတော့ ပုလင်းတူ ဗူးဆို့တွေပါပဲ။ ကဗျာဆရာ … ကဗျာဆရာနဲ့ ကျွန်တော်က တလှေထဲစီးတွေပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ခရီးက မီးပင်လယ်။ ကဗျာဆရာ … ကဗျာဆရာရဲ့ ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရ။ ဒုဌ၀တီမှ ဧရာဝတီ ကျွန်တော်တို့ကဗျာ ဒီဂရီတွေမြင့်ခဲ့ရ … ခြင်္သေ့စောင့်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲဆို့ခဲ့ရ … မနက်ဖြန်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲငြိခဲ့ရ … ကဗျာဆရာရဲ့ `လမင်းတရာ´ ငြိမ်းချမ်းရေး စာဆိုကြီးကို ဂုဏ်ပြုထုတ်ဝေခဲ့တာ ကဗျာဆရာရဲ့ ဒုဋ္ဌ၀တီမှ ဧရာဝတီ ပြည်သူ့စာရေးဆရာကြီးကို...
>Maung Yit – Dialogue with Broken Hearted Voters
> မတ်လ ပြောစရာများ – အသဲကွဲတဲ့ မဲတမဲနှင့် စကားပြောခြင်း မောင်ရစ် ဧပြီ ၄၊ ၂၀၀၉ တမ္ဘာလုံး စီးပွားပျက်လို့ဆိုလား လူတွေ အိုးအိမ်တွေပစ်၊ အလုပ်တွေပစ် ဖြစ်နေကြချိန်မှာ သွေးပျက်ပြီး သေနတ်နဲ့ သူများတွေကို ပစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ပစ်နေကြချိန်မှာ – ကြက်ဆူပင်က မီးတကျီကျီလုပ်တယ်လို့ ပြောကြမယ် ထင်တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲပေါ့လေ။ ဖြစ်ပုံက ၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ကတည်းမှာ စပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက ဒါကိုစဉ်းစားကြပုံရပါတယ်။ စာတမ်းရေးနိုင်တဲ့သူတွေရေး၊ စင်ပေါ်တက် ဟောနိုင်တဲ့သူတွေက ဟော၊ ရေဒီယိုကတဆင့် ပြောနိုင်တဲ့သူကလည်း ပြောပေါ့လေ။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ဒါကို အရင်ဆုံး လိုအပ်ချက်တခုအဖြစ် ပြောနေကြပုံရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၂၀၀၈...
Page 825 of 902«1...823824825826827...902»
>Than Soe Hlaing - Fire Out Break in Burma, disaster for people